महामारीमा कसलाई गुहारौं सरकार ? - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home बिचार महामारीमा कसलाई गुहारौं सरकार ?
महामारीले च्यापिरहेका बेला सरकारको भने नचाहिँदो कुरामा बढी व्यस्तता भएको देखिन्छ । विश्व नै कोभिड–१९ ले थिलथिलो परेको अवस्थामा नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । लकडाउन खुकुलो पारेसँगै संक्रमण ह्वात्तै बढ्दा भारत, अस्टे«लिया, अमेरिकाजस्ता विकसित देशले लकडाउनमा थप कडाइ गरेका छन् । नेपालमा १६ हजारभन्दा बढी संक्रमित र ३५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको ढलमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिएको स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव छ ।
यस्तो बेलामा सत्ताधारी दल आन्तरिक विवादमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइको दम्भ, परामर्श नगर्ने, विज्ञको कुरै नसुन्ने, एकपछि अर्को एकलौटी निर्णय गर्ने, उनकै निकट मन्त्री एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा मुछिदै जानेजस्ता कारणले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायतले ओलीको राजीनामा मागिरहेका छन् । विगत एक सातादेखि अध्यक्षद्वय बेलाबेला निष्कर्षहीन वार्तामा बस्दै आएका छन् । जनतालाई लामो समयदेखि टेलिभिजनका धारावाहिक जस्तै यसपछि के होला भन्ने भ्रममा राखेको छ । घरमा दुई जना केटाकेटी झगडा हुँदा पूरै परिवारका सदस्यलाई बाधा पु¥याए जस्तै अध्यक्षद्वयको टकरावले सिंगो देशको काममा बाधा पु-याइरहेको छ ।
कोरियालगायत विभिन्न देशमा रोजगारीमा फर्कन चाहने हवाई उडान नहुँदा हारगुहार गरिरहेका छन् । बझाङ, गुल्मी, पर्वत, सिन्धुपाल्चोकलगायतका पहाडी जिल्लामा पानीसँगै गएको पहिरोका कारण जनधनको क्षति भइरहेको छ । तराईका जनता पनि बर्सेनिजस्तै कतिबेला डुबानमा परिन्छ भन्दै डराउँदै बस्न बाध्य छन् । समयमै पानी परेका कारण अहिलेसम्म देशका धेरैजसो ठाउँमा रोपाइँ भइसकेको छ । तर, कृषकले मलखाद किन्नका लागि खेतमा भन्दा पनि लाइनमा बसेर बढी समय बिताउनुपरेको विडम्बना छ । लकडाउनको तीन महिना बित्दासम्म पनि अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा महिला, बालबालिका असुरक्षित रहेका छन् । युवा क्वारेन्टाइनमा नबसी भाग्ने क्रम रोकिएको छैन । राजु सदाजस्तै जीवनजल पनि नपाई क्वारेन्टाइनमै अकालमा ज्यान गुमाउने डरले क्वारेन्टाइन कालकोठरीजस्ता बनेका छन् । सरकार भने कहिले रात्रिभोज त कहिले रात्रि भोज अनि सहमति जुटाउने निहुँमा दिन काटिरहेको छ । लकडाउन छ भन्दै जनता घरभित्रै बसिरहँदा प्रधानमन्त्रीले सडकमा आफ्नो जुलुस प्रदर्शन गराइरहेका छन् ।
यो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रको मुख नताकेर आफ्ना नागरिकको पीडामा मलम लगाउन ढिला गर्नुहुँदैन
उता भारतले भूतपूर्व गोरखा सैनिकलाई पेन्सन बुझ्न भन्दै तीन दिनका लागि झुलाघाटलगायत सुदूरपश्चिमका नाका खोलेको छ । अर्कोतिर हातमुख जोड्न सकस भएकै कारण यातायात व्यवसायी, पत्रकार, पर्यटन व्यवसायी, निजी स्कुलका शिक्षकजस्ता मध्यमवर्ग सडकमा आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विद्यालय सञ्चालन अनिश्चित हुँदै गएपछि पर्वतको जनआदर्श अंग्रेजी आवासीय विद्यालयका प्रिन्सिपल श्यामलाल सुनारले आत्महत्या गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सनले सरकारले आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे साउनदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने भनिसकेको छ । चार महिनादेखि घरभित्र गुम्सिएर बसेका सहरका लाखौं विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा पनि पढ्न पाएनन् भने के गरी दिन कटाउँछन् होला, कतै साइबर अपराधमा त फस्ने होइनन् ?
यस्तो बेलामा सरकारमा बस्नेले चटक देखाउन छोडेर एउटा असल अभिभावकको दायित्व वहन गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकार बचाउन सडक आन्दोलन चलिरहेको छ । सरकारबाट जनतालाई यसरी नै उपेक्षा गरिँदै लगिने हो भने अकालमा मृत्युवरण गर्नेको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । लाखौं विद्यार्थीहरू तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन् । सरकारले १ असारदेखि भर्चुअल, अनलाइन कक्षाको सुरुवात भएको ठोकुवा गरेको भए पनि कतिपय विद्यार्थीले घरमा इन्टरनेट, विद्युत्, टेलिभिजन, मोबाइल र रेडियोसम्म नहुँदा पढ्न पाएका छैनन् । ४५ सयभन्दा बढी सामुदायिक स्कुल क्वारेन्टाइनमा परिणत हुँदा अध्ययन-अध्यापनमा समस्या देखिएको छ ।
अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका २५ प्रतिशत घरधुरीले मात्र विद्युत् उपभोग गरिहेका छन् । ३२ प्रतिशत घरधुरीले सौर्य ऊर्जालगायतले काम चलाइरहेका छन् । कर्णालीकै ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये चारवटा तहमा मात्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण हुनुले सरकारलाई कहिले पनि पिरोलेन । कतिपय स्थानीय निकायले घर फर्किने युवाका लागि लैनो गाई, भैंसी तथा घर बनाउन, व्यवसाय सन्चालन गर्न निब्र्याजी ऋणको सुविधा प्रदान गर्न थालेका छन् । लामो समयपछि स्वदेश फर्केका र छिट्टै काममा फर्किने सम्भावना नभएकाले प्रत्येक स्थानीय सरकारले युवाको मर्म बुझेर उनीहरूलाई गाउँघरमै टिकाइराख्न छिटै रोजगारीका अवसर निर्माण गर्नुपर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार, यातायात र बत्ती, पानीको सुविधा भएमा जनता गाउँघरमै रमाउने छन् । उन्नत कृषिका लागि मलखाद, बीउबिजन, पशुपालनजस्ता उत्पादकत्वका लागि बजारको व्यवस्था हुने हो भने परिवार छोडेर पसिना बगाउन एउटा युवाले कहिले पनि विदेश जान चाहँदैन ।
देशका सरकारी कार्यालयमा नयाँ (चुच्चे) नक्सा पु-याइए पनि उक्त जमिन कब्जा गरिराखेको भारतसँग नेपाल सरकारले औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल वा वार्तासम्म गरेको छैन । सरकार बनेको तीन वर्षसम्म न त नेपालका नदीमा पानी जहाज चल्यो, न त घरघरमा ग्याँसका लाइन नै जोडिए । मेलम्चीको पानी सुरुङबाट पास गरेपछि पनि जालझेल नहोला भन्न सकिन्न । सरकारले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर देशको हितमा काम गरेको भए जम्मा ८८५ किलोमिटर पूर्व पश्चिम लम्बाइ र ९३ किलोमिटर चौडाइ भएको सानो देशको विकास गर्न कति नै कठिन थियो र ? स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार मिलेर आआफ्नो ठाउँबाट काम गर्न कम्मर कसेको भए कसले पो रोकेको थियो र ? तर, तीनवटै सरकार आफ्नै तलब, भत्ता, सुविधा बढाउन, आफ्नै लागि महँगा गाडी किन्न र आफ्नै आसेपोसेलाई पोस्न मात्र तल्लीन देखिए ।
रुकुमको सोती घटनाले छुवाछूत र जातपात डरलाग्दो रहेको देखाउँछ । बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने, मलमुत्र खुवाउने, दाइजो नपाउँदा जिउँदै जलाउनेक्रम रोकिएको छैन । छाउपडी प्रथाको अन्त्य एकादेशको कथा हुँदै गएको छ । नदीनालामा पुल नहुँदा पौडेर वा ट्युबबाट नदी पार गर्ने अवस्था कायमै छ । तुइनसम्म पनि छैनन् । सरकारका तीन वर्ष प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचार र पार्टी एकताबाहेक देश विकासमा बितेको देख्न पाइएको छैन । कुर्सी हात पार्नका लागि मात्र पार्टी एकता भएको कुरा अहिले छर्लंग भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रको मुख नताकेर आफ्ना नागरिकको पीडामा मलम लगाउन ढिला गर्नुहँुदैन । निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर फ्रिज भइरहेको बजेटको सदुपयोग गर्दै युवालाई गाउँघरमै टिकाइराख्न भूमि बैंक सञ्चालन र कर छुटसहितका विभिन्न आकर्षक प्याकेज ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।